(၅၂)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးနှင့် ဆက်စပ်အစည်းအဝေးများသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင် တက်ရောက် (ဒုတိယနေ့) – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
(၅၂)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးနှင့် ဆက်စပ်အစည်းအဝေးများသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင် တက်ရောက် (ဒုတိယနေ့)
ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဗန်ကောက်မြို့၌ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၃၀ ရက်နေ့မှ သြဂုတ်လ ၂ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပပြုလုပ်မည့် (၅၂)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေးနှင့် ဆက်စပ်အစည်းအဝေးများသို့ တက်ရောက်လျက်ရှိသည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်သည် ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက်၊ နံနက်ပိုင်းတွင် အခြား အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများနှင့်အတူ ထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ပရာယုဒ် ချန်အိုချာ(ငြိမ်း)အား ဂါရဝပြုတွေ့ဆုံသည့် အစီအစဉ်သို့ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
ထို့နောက် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသည် (၅၂)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေး၏ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့လည်းကောင်း၊ (၅၂)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ၏ မျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးနှင့် သီးသန့်အစည်းအဝေးသို့ လည်းကောင်း၊ ပီရူးနိုင်ငံမှ အရှေ့တောင်အာရှ ချစ်ကြည်ရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးစာချုပ်သို့ ပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးသည့် အခမ်းအနားသို့ လည်းကောင်း၊ အာဆီယံ၏ ဆွေးနွေးဖက်နိုင်ငံများဖြစ်သည့် တရုတ်၊ ရုရှား၊ နယူးဇီလန်နိုင်ငံတို့နှင့် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးများသို့ လည်းကောင်း အသီးသီးတက်ရောက်ခဲ့သည်။ (၅၂)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ၏ မျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးနှင့် သီးသန့်အစည်းအဝေးတို့တွင် အာဆီယံအသိုက်အဝန်း ထူထောင်သည့်အခြေအနေနှင့် အာဆီယံ၏ပြင်ပဆက်ဆံရေးကိစ္စများ၊ (၃၄)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေး၏ နောက်ဆက်တွဲဆောင်ရွက်မှုများ၊ (၂၀)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံအပေါင်းသုံး နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေး၊ (၉)ကြိမ်မြောက် အရှေ့အာရှထိပ်သီးအစည်းအဝေးဆိုင်ရာ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေး၊ (၂၆)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံဒေသဆိုင်ရာဖိုရမ်၏ သီးသန့်အစည်းအဝေးနှင့် မျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးများ ကျင်းပနိုင်ရေးအတွက် ပြင်ဆင်ထားရှိမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးခဲ့သည့်အပြင် ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာရေးရာကိစ္စရပ်များကို အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
ဆက်လက်၍ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်သည် ၃၁-၇-၂၀၁၉ ရက်နေ့၊ နေ့လယ် ၁၄:၁၅ နာရီတွင် နော်ဝေနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး H.E. Ine Marie Eriksen Søreide နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ရာ မြန်မာ-နော်ဝေ နှစ်နိုင်ငံအကြား ဆက်ဆံရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်ရေးကိစ္စများ၊ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ကဏ္ဍ၊ ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍ၊ ရေအားလျှပ်စစ်ကဏ္ဍ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးကဏ္ဍများ အပါအဝင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ကဏ္ဍများတွင် တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်သွားရေး ကိစ္စရပ်များ၊ အာဆီယံအဖွဲ့ကြီး၏ ကဏ္ဍအလိုက် ဆွေးနွေးဖက်နိုင်ငံဖြစ်သည့် နော်ဝေနိုင်ငံအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများနှင့် နှစ်ဖက်အကျိုးတူကိစ္စများတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မြှင့်တင်ရေးကိစ္စရပ်များ၊ နှစ်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနများအကြား ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုယန္တရား (Foreign Office Consultation) တည်ထောင်ရေးကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
ယင်းနောက် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသည် ၁၇:၁၅ နာရီအချိန်တွင် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး H.E. Kang Kyung-wha နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ရာ မြန်မာ-ကိုရီးယားသမ္မတ နှစ်နိုင်ငံအကြား ဆက်ဆံရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်ရေးကိစ္စရပ်များ၊ ကုန်သွယ်ရေး၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် စီးပွားရေးအရ တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်မှု ကိစ္စရပ်များ နှစ်နိုင်ငံအကြား အဆင့်မြင့်ခရီးစဉ်များ အပြန်အလှန် လည်ပတ်ရေးကိစ္စ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလအတွင်း အာဆီယံ-ကိုရီးယား အထိမ်းအမှတ် ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကို ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံတွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့်ကိစ္စ၊ မဲခေါင်-ကိုရီးယား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး မူဘောင်အောက်မှ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကိစ္စ၊ ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်အရေးကိစ္စ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ မြန်မာနိုင်ငံမှ အဆင့်မြင့်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်၍ ပြန်လည်လက်ခံရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် မြန်မာဘက်မှ ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုများကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည့် ကိစ္စအပါအဝင် နောက်ဆုံးဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု အခြေအနေများကို ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။